Nanazava hevitra lehibe i VeedVerks tamin'ny famaritana ny hempodin'ny indostria
22 Mey 2019 - Vaovao Fanaparitahana Cannabis
Henoy ny Potcast, na jerena etsy ambony.
VeedVerks Sponsor NASCAR
Travis Lippert avy amin'i VeedVerks dia nitsidika ny fantsom-pahalalana Cannabis Legalization News hiresaka momba ny fanohanan'ny orinasany Carl Long Long mpanazatra an'i NASCAR - izay nanamarika ny fiverenany tamin'ny hazakazaka taorian'ny niandany teny an-tsisintany nanomboka ny taona 2009 tamin'ny fandoavana onitra azony tamin'ny ekipany.
I Carl Long dia tsy maintsy nanala ny sary famantarana VeedVerks teo amin'ny saron-dohany alohan'ny fihazakazahana. Tonga izany na eo aza ny VeedVerks izay manolotra CBD fotsiny amin'ny hemp indostrialy ara-dalàna 100%. Ny fanesorana ny sticker VeedVerks amin'ny sarimihetsika dia tonga tamin'ny 2017, izay efa herintaona mahery talohan'ny nandraisan'ny Farm Farm 2018 ara-dalàna tanteraka ny hemp. Na izany aza, i Colorado dia nanana ny programa mpanamory hemp indostrialy tamin'ny volavolan-dalàna momba ny fambolena 2014 - ka tokony ho tsara izany.
Misy cannabinoids 113 samy hafa ao amin'ny cannabis
Nanazava ny hevi-dehibe ao amin'ny famaritana ny hemp indostrialy - Mihatra amin'ny Delta-9 THC ihany io fa tsy misy cannabinoïde hafa. Ka ny cannabinoid malaza an'ny CBD amin'izao fotoana izao dia mety hanana namana vaovao, toa an'i CBN, na THCv, na iray amin'ireo 112 hafa cannabinoids azon'ny abaka. Mampametra-panontaniana ireo karazana voa hafa-hemp hitantsika amin'ny ho avy.
Ny CBD Hemp dia mitovy amin'ny mari-pahaizana rongony THC
Tatitra momba ny tombony azo amin'ny CBD Anecdotal
Travis dia niasa tamin'i VeedVerks nandritra ny 4 taona, ary nampahatsiahivina ny vidin'ny CBD mihena hatramin'ny $ 60,000 iray kilao amin'ny taona 2016 ka hatramin'ny $ 7,000 ankehitriny (na $ 3,500 XNUMX raha tsy mitady kalitao tsara ianao).
Ny antony dia miseho izy - farafaharatsiny miorina amin'ny fijoroana vavolombelona avy mpanjifa VeedVerks afa-po ao amin'ny tranokalany. izay CBD dia miasa ho an'ny:
homamiadana - pancreatic indrindra.
VEEDVERKS - Colorado CBD Hemp Co.
CBD Hitan'ny tahan'ny tratry ny homamiadana triple pancreatic
Izahay ao amin'ny mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony dia tsy dokotera, mpisolovava fotsiny - koa homenay anao ny rohy feno ao ambadiky ny lohateny hoe ahoana ny fisehon'ny CBD amin'ny taham-pahafatin'ny triple cancer cancer.
Tsidiho ny VeedVerks ao amin'ny YouTube
Azonao atao ny miantsena ny VeedVerks ao amin'ny tranonkalany: https://veedverks.com/ na mahita ireo vokatra ao amina fivarotana iray any Colorado sy ireo fanjakana hafa voatanisa ao amin'ny tranokalany.
Ary afaka misoratra anarana amin'ny fantsona youtube azy ireo ianao amin'ny: https://www.youtube.com/channel/UCiBQWPce60fI_II32mDST8Q
Hahita anao amin'ny herinandro manaraka!